Kedu otu esi ekewa ọkwa mgbochi mmiri nke IP65? Kedu maka ọkwa IP65 enweghị mmiri nke ọkụ anyanwụ?
Kedu maka ọkwa IP65 enweghị mmiri nke ọkụ anyanwụ? Kedu otu esi ekewa ọkwa mgbochi mmiri nke IP65?
Kedu maka ọkwa IP65 enweghị mmiri nke ọkụ anyanwụ?
A na-edobe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'afọ niile, ma ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na-ebute ifufe na mmiri ozuzo. Otú ọ dị, ìhè n'okporo ámá anyanwụ nwere sekit. Ozugbo ahịrị na-abanye na mmiri, ọ nwere ike ime ka obere sekit nke ìhè okporo ụzọ. Nke a na-ebute ntapu ma ọ bụ enweghị ọkụ na nsogbu ndị ọzọ. Ya mere, oriọna nke anyanwụ ga-abụrịrị mmiri na-adịghị.
IP65 IP bụ mkpirisi nke Ingress Protection, na ọkwa IP bụ ọkwa nchebe nke mkpuchi ngwa eletriki megide ntinye nke ihe ndị si mba ọzọ.
Ọtụtụ ọkụ anwụ na-egosi ugbu a IP65, nke dịlarị elu.
Ọkwa IP65 na-egbochi uzuzu kpamkpam na-egbochi uzuzu ịbanye, na ọkwa mmiri na-adịghị bụ na jets dị ala site n'akụkụ ọ bụla enweghị mmetụta ọ bụla.
Kedu otu esi ekewa ọkwa mgbochi mmiri nke IP65?
Uzuzu uzuzu ọkwa (IPXX mbụ X na-egosi)
0: enweghị nchedo
1: Gbochie ntinye nke nnukwu ihe siri ike
2: Gbochie ntinye nke ihe siri ike nke ọkara
3: Gbochie ntinye nke obere ihe siri ike
4: Gbochie ihe siri ike kariri 1mm ịbanye
5: Gbochie mkpo ihe na-emebi emebi
6: gbochie kpamkpam uzuzu ịbanye
Ọkwa mkpuchi mmiri (IPXX nke abụọ X na-egosi)
1: Mmụba mmiri na-adaba n'ime shea enweghị mmetụta
2: Mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo na-esi na 15 degrees na shei enweghị mmetụta
3: Mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo na-agbapụta site na ogo 60 ruo shea enweghị mmetụta
4: Mmiri na-agbapụ n'akụkụ ọ bụla enweghị mmetụta ọ bụla
5: Ngwunye obere nrụgide n'akụkụ ọ bụla enweghị mmetụta ọ bụla
6: Mmiri jet dị elu enweghị mmetụta
7: Ọ nwere ike idi imikpu mmiri n'ime obere oge (15cm-1m, n'ime ọkara elekere)
8: Tinye mmiri ruo ogologo oge n'okpuru ụfọdụ nrụgide
Ogo nguzogide mmiri nke ngwaahịa Sresky
Ngwaahịa Sresky nwere ọkwa mmiri anaghị egbochi mmiri IP65 ma nwee ule siri ike nke uzuzu na mmiri.
Ahụ aluminom niile nwere Anti-oxidation na teknụzụ mgbochi corrosion nwere ike igbochi uzuzu, mmiri na corrosion nke ọma. Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe n'èzí. Dị ka ọdọ mmiri, oke osimiri na ogbunigwe.